गोपनीयता नीति | Radionp.com
मनपर्ने भर्खरै सुनेको
यो गोपनीयता नीतिले केवल Radionp.com का ग्राहकहरू र हाम्रो अनलाइन सेवाहरूको प्रयोगकर्तालाई मात्र लागु हुँदछ।
Radionp.com ले हाम्रो सेवाहरू प्रयोग गर्दा तपाईंको गोपनीयता सुरक्षित छ भन्ने सुनिश्चित गर्ने कार्य गर्दछ। त्यसैले हामीसँग तपाइँको व्यक्तिगत तथ्यांकहरू कसरी प्रशोधन गरिनेछ र सुरक्षित राखिनेछ भन्ने कुराको नीतिगत सेटिङ छ। हामीले यस गोपनीयता नीतिमा अपनाएका कुनै पनि परिवर्तनहरू अनलाइन गइ हाम्रो वेभसाइटमा भेट्टाउन सकिन्छ।
हामी तपाईंको व्यक्तिगत तथ्यांकहरू कसरी प्रयोग गर्छौं?
तपाईंको व्यक्तिगत विवरण उपलब्ध गराउँदा, हाम्रो प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न र तपाईंले अपेक्षा गर्नुभएको सेवा प्रदान गर्नका लागि तपाइँले हामीलाई सहमति दिनुहुन्छ। हामी तपाइँको तथ्यांकहरू केवल तपाइँलाई हाम्रो सेवाहरू लिन वा जबसम्म कानूनी रूपमा हामीआवश्यकता पर्दछ को तव सम्मको लागी मात्र राख्नेछौं। यस पछि तपाईंको व्यक्तिगत तथ्यांकहरू मेटानेछ। कानूनी भण्डारण आवश्यकता भएको खण्डमा हामी तपाईंको तथ्यांकहरू हटाउन सक्नेछैनाै, जस्तै हिसावकिताब राख्ने नियमहरू वा तथ्यांकहरू राख्नको लागी अन्य कानूनी आधारहरू जस्तै करार करोबारसँग सम्बन्धित पर्दछन् ।
सामान्य तथ्यांक संरक्षण विनियमन (GDPR)
युरोपेली आर्थिक क्षेत्र (ईईई) मा हामीले तपाइँलाईमात्र गैर-व्यक्तिगत विज्ञापनहरू देखाउँनेछौँ। यी विज्ञापनहरू तपाईंको विगतका व्यवहारमा आधारित हुने छैनन् र विज्ञापन लक्ष्यीकरणका लागि कुने पनि कुकीजहरू प्रयोग हुने छैनन् ।
तपाईंको अधिकारहरू के के हुनेछन् ?
हामीले भण्डारण गरेको तपाइँको व्यक्तिगत तथ्यांकहरूको बारेमा जानकारी अनुरोध गर्ने अधिकार तपाइँसँग हुनेछ। यदि तपाईंको तथ्यांकहरू गलत, अपूर्ण वा अप्रासंगिक भएमा, तपाईको जानकारी सशाेधन गर्न वा हटाउनका अनुरोध गर्न सक्नुहुनेछ। वार्षिक रूपमा, हामीले हाम्रो खाताहरूमा संरक्षण गरेका तपाइँको व्यक्तिगत तथ्यांकहरूको बारेमा व्यक्तिगत जानकारी लिखित कागजात अनुरोध गर्न सक्नुहुनेछ। यो कागजातअनुरोध गर्न कृपया Radionp.com ग्राहक सेवामा पत्र लेख्नुहोस्। तपाइँले कुनै पनि समयमा मार्केटिङ उद्देश्यहरू (उदाहरणका लागि सूचीहरू, समाचारपत्रहरू वा प्रस्तावहरू) को लागि तथ्यांकहरूको प्रयोगको हाम्रो सहमति कुनै पनि वेला फिर्ता लिन सक्नुहुनेछ ।
यी तथ्यांकहरूको पहुँच को को सँग हुनेछ?
हामी कहिल्यै Radionp.com ग्रुप बाहिर मार्केटिङ उद्देश्यहरूको लागि तेस्रो पक्षमा तपाईंको तथ्यांकहरू दिने, बेच्ने वा स्वाइप गर्ने छैनाैं ।
हामी तपाईंको तथ्यांकहरू कसरी सुरक्षित गर्छौं?
हामीले तपाईंको तथ्यांकहरूको चाेरी, हेरफेर, अनधिकृत पहुँच, आदिबाट सुरक्षा गर्नको लागि प्राविधिक र संगठनात्मक उपायहरू लिएका छाैं । हामी निरन्तर प्राविधिक प्रगति र विकासका साथ हाम्रो सुरक्षण उपायहरू अत्यावधि गर्दछौं। Radionp.com मा हामी इन्क्रिप्शनको प्रयोग गरेर तपाईंको तथ्यांकहरूको रक्षा गर्दछौं। सेक्योर सकेटस् लेयर (एस.एस.एल.) एक यस्तो विधि हो कि जसले सबै खरीदारहरू र विक्रेताको बीच पठाईएको जानकारीहरूलाई इन्क्रिप्ट गर्दछ ।
कुकी एक सानो टेक्स्ट फाइल हो जुन निरन्तर प्रयोगका दाैरान तपाईंको कम्प्युटर वा मोबाइल उपकरणबाट जनाकारी प्राप्त गरी सेभ गरिन्छ । Radionp.com ले तपाइँका प्रयोग बढाउन र सरल बनाउन कुकीजहरू प्रयोग गर्दछ। हामी व्यक्तिगत जानकारी भण्डारण गर्न वा तेस्रो पक्षमा जानकारी दिनका लागि कुकीजहरू प्रयोग गर्दैनौं।
त्यहाँ दुई प्रकारका कुकीजहरू छन्: स्थायी र अस्थायी (सत्र कुकीजहरू)। स्थायी कुकीजहरूले बढीमा १२ महिनाको समय सम्मको लागि तपाईंको कम्प्युटर वा मोबाइल यन्त्रमा फाईलको रुपमा भण्डारण गरिनेछ । सत्र कुकीजहरूले अस्थायी रूपमा भण्डार गरिएका हुन्छन् र जब तपाइँ तपाइँको ब्राउजर बन्द हुन्छ, यो पनि हराउँदछ । हामी तपाइँको सुरुवाति पृष्ठको चार्ट कस्ताे बनाउने भन्नको लागि र तपाईको विवरणाहरू याद राख्नका स्थायी कुकीजको प्रयोग गर्दछौं यदि तपाईले लग इन गर्दा “मलाई सम्झनुहोस्” भन्ने चयन गर्नु भएको छ भने ।
तपाइँ आफ्नो ब्राउजर प्रयोग गरेर सजिलै कुकीजहरू तपाइँको कम्प्युटर वा मोबाइलबाट मेटाउन सक्नुहुनेछ। कुकीजहरू कसरी हटाउने र मेटाउने भन्ने निर्देशनहरूको लागि कृपया तपाईको ब्राउजरमा रहेको “मद्दत” मा क्लिक गर्नुहोस् । तपाइँले कुकीजहरू डिस्यबल गर्न वा प्रत्येक पटक नयाँ कुकी तपाईंको कम्प्युटर वा मोबाइलमा पठाइएको सूचना प्राप्त गर्नको लागि सक्षम सक्नुहुनेछ । कृपया ध्यानमा राख्नुहोस् कि यदि तपाइँले कुकीजहरू डिस्यबल छनौट गर्नु भयाध् भने, तपाइँले सबै सुविधाहरूको फाइदा उठाउन नसक्नुहुन्छ।
हामीले फेसबुक, गुगल एडसेन्स, गुगल एनालिटिक्स, गुगल + र ट्विटर जस्ता विश्लेषणात्मक उपकरणहरूमा तथ्याङ्कहरू संकलन गर्न तेस्रो-पक्ष कुकीजहरू प्रयोग गर्दछौं। प्रयोग गरिएका कुकिजहरू दुवै स्थायी र अस्थायी कुकीजहरू (सत्र कुकीजहरू) हुन्फ। स्थायी कुकीहरू तपाईंको कम्प्युटर वा मोबाइलमा 24 महिना भन्दा बढी भण्डारण हुनेछैन।
Radionp.com अन्य वेबसाइटहरूको लिङ्कहरू समावेश हुन सक्छ जुन हाम्रो सुपरिभेषणमा पर्दैन। हामी गोपनीयताको सुरक्षा वा यी वेबसाइटहरूको सामग्रीको कुनै पनि जिम्मेवारी स्वीकार गर्न सक्दैनौं, तर हामी यी लिङ्कहरूलाई विशेष विषयहरूको बारे थप जानकारी पाउन सजिलो बनाउनका लागी यी लिङ्कहरू प्रस्ताव गर्दछौं।
यो साइटको सामग्री प्रतिलिपि अधिकार सुरक्षित छ र Radionp.com को सम्पत्तिमा पर्दछ।
Tतेस्रो पक्ष डाटा प्रोसेसरहरू
Radionp.com ले तेस्रो-पक्षका प्रोसेसरहरू मात्र प्रयोग गर्दछ जुन युरोपियन युनियनको सामान्य डाटा सुरक्षा विनियमन (GDPR) अनुपालना गर्दछ र हरेक तेस्रो पक्षका प्रोसेसरको लागि डेटा प्रोसेसिंग सम्झौताहरू (डी.पी.ए.) गरिएको छ ।
नेपालका सबै शीर्ष अनलाइन रेडियो स्टेशनहरू । एउटा रेडियो आइकनमा क्लिक गर्नुहोस् र घर वा कार्यालय बसी सुन्नुहोस्।
शीर्ष5रेडियो स्टेशनहरू
शीर्ष5रचनाहरू
तपाईंंको रेडियो संग्लन गर्नुहोस्
© 2022 InstantAudio. सबै अधिकार सुरक्षित. ・ DMCA ・ गोपनीयता नीति
यस वेबसाइटले कुकीहरू प्रयोग गर्दछजानकारी